အရှင် သီလာနန္ဒဘိဝံသ (အင်္ဂလိပ်: The Ven. Sīlānandabivamsa) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်၍ မြန်မာပြည်မှ ထင်ရှားသော သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်၏ ပထမဆုံး ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖြစ်ကာ အမေရိက ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ အကြံပေး ဆရာတော်လည်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ် မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် စာအုပ်စာတမ်းများစွာပြုစုခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၂ တွင် ဆရာတော် ပဏ္ဏဝတထံ၌ပင် ရဟန်းဖြစ်တော်မူသည်။ ၁၉၅၀တွင် သာသနဓဇ သိရိပုဗ္ဗာရ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့၊ ၁၉၅၄တွင် ထိုစဉ် မြန်မာပြည်၌ အခက်ခဲဆုံးစာမေးပွဲဖြစ်သော မန္တလေးမြို့ ပရိယတ္တိသာသနဟိတအဖွဲ့ကြီး၏ ပရိယတ္တိသာသနဟိတ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ကို ရရှိသောကြောင့် သီလာနန္ဒဘိဝံသ ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၅၄တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးရာ ထို၌ GCE အဆင့်မြင့်တန်းကို ပါဠိနှင့် သက္ကတဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး မဟာစည်နည်းနာ ဝိပဿနာကျင့်ကြံသည်။
အမေရိက ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း(the Theravada Buddhist Society of America) ၌ အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ ထိုအဖွဲ့၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဓမ္မနန္ဒ ဝိဟာကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဖြစ်သည်။
↑ မင်းယုဝေ (၂၀၁၄ ဩဂုတ်). သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏိဿာရ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်. ရန်ကုန်: ဒေါခင်ဝင်းရီ (ဝင်းစာပေ), 102။
↑ U Silananda (2002). The Four Foundations of Mindfulness. Simon and Schuster. ISBN 978-0-86171-328-8။
↑ Sayadaw U Sãlànanda (1999). VOLITION-An Introduction to the Law of Kamma. INWARD PATH PUBLISHER။
↑ (2000) Paritta Pāḷi & Protective Verses: A Collection of Eleven Protective Suttas, an English Translation. Government of the Union of Myanmar, Ministry of Religious Affairs, International Theravāda Buddhist Missionary University။
↑ U Silananda Sayadaw (2010). Dependent Origination (Paticca-samuppada): The Wheel of Life။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သီလာနန္ဒ&oldid=517557" မှ ရယူရန်